HGH Thailand Pharmacy - Qodobka hormoonka koritaanka
By HGH Thailand January 10, 2018
HGH (somatotropin) ee Thailand
Hormar kobcinta (somatotropin) - kuwa ugu caansan ee cayaaraha, jimicsiga iyo dalxiisayaasha kale ee Thailand, waa wakiil farmaajo. Markii hore, sida anabolic, somatotropin waxaa loo isticmaali jiray oo keliya jirka, culays-saarista iyo ciyaaraha kale ee la xiriira horumarinta murqaha, hadda cayaartoyda, jimicsiyada iyo wakiillada cayaaraha cayaaraha waxay u isticmaalaan inay si firfircoon uga shaqeeyaan jirka.
Somatotropin ayaa cadeeyay inuu yahay qalab wanaagsan oo lagu kordhinayo adkeysiga, oo si fiican loo xaqiijiyey daaweynta dhaawacyada. Sidaa darteed, baaxadda daroogada ayaa sii kordheysa. Ugu dambeyn, si xirfad leh, adigoo isticmaalaya sheygan, waxaad kordhin kartaa kobaca dhalinyaradda dhalinyarada ah, tani waa mid muhiim ah waana u qalmaa hadal gaar ah.
Muxuu jidhku u baahan yahay hormoon somatoter (HGH)? Soma macnaheedu waa jir. Somatotropic macnaheedu waa "lahjada" - jilicsanaanta jidhka. Inta lagu jiro koritaanka jirka, somatotropin waa kobaca ugu weyn ee koritaanka. Koritaanka jirka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay tirada, labadaba dherer ahaan iyo ballacaba. Sodotropin badan oo jidhka ka mid ah, ayaa sii kordhaya qofka.
Kadib marka la gooyo aagagga kobaca ee ku jira lafaha qalfoofka ossify, iyo koritaanka lafaha dhererka joogtada ah, wakhti yar ayaa weli jira kororka lafaha ee dhumucda. Qaybo ka mid ah qalfoofka, aagagga koritaanku looma galmoodo ossification inta lagu jiro nolosha qofka. Meelaha noocan ah ee kobaca waxay ku jiraan daanka hoose, sanka, gacmaha iyo cagaha.
Mararka qaarkood waxay dhacdaa in sababo kala duwan oo da 'yar,
dheecaanka hormoonka hormoonka kor u kaca. Kadibna waxay ku koraan garbahooyinka, oo mararka qaar gaari karo dherer ka badan xNUMX m. Xaaladdan waxaa loo tixgeliyaa cudur waxaana loo yaqaan "gigantism." Dad badan oo ka mid ah meeraha dhulkeena, si kastaba ha ahaatee, aad ayay ugu faraxsan yihiin inaanan noqon kooxda ugu weyn, laakiin dad badan. Waalidiin badan ayaa raba in ay kor u qaadaan koritaanka caruurtooda, imika horeyba waa suurtagal.
Jidkaas, ninka ugu dheeraa abidkiis wuxuu ku noolaa dhulka, wuxuu lahaa kororka 2 m 48 cm (!). Marmarka qaarkood hormoonada hormoonada koritaanka ayaa si aad ah u kordheysa jiritaanka jirka weyn, marka badi goobaha koritaanku horey u xiran yihiin. Xaaladdan, qofka daanka hoose, sanka, gacmaha iyo cagaha ayaa si wayn u koraya. Xaaladdan waxaa lagu magacaabaa "acromegaly", sida kor u kaca qaybo ka mid ah jirka. In qof weyn oo si buuxda loo sameeyay, somatotropin wuxuu qabtaa hawlaha anabolic.
Waxay mas'uul ka tahay hababka loo yaqaan "synthesis protein" ee dhammaan xubnaha iyo unugyada iyadoon laga reebin. Dad tiro yar ayaa og in hargabka HK iyo wax waliba sidoo kale hormoonka cadaadiska. Marka la eego walbahaarku, heerka gulukooska dhiigga ee dhiigga ayaa sare u kaca, oo tani waxay ka caawisaa jidhka inuu la qabsado xaalad aan fiicnayn by kordhinta suxuunta borotiinka, ugu horrayn ee qaababka tamarta ee unugyada.
Sidaa daraadeed, dadka dastuur adag oo leh qalfoof xooggan oo guud ahaan guud ahaanba waa u dulqaadanayaan dhammaan noocyada walwalka iyo kala-goysyada nolosheena. Waxay ka caawiyaan sidan somatotropin. Tan iyo meelihii koritaanka daanka hoose, sanka, gacmaha iyo lugaha marnaba ma xirna, "qaybahan" waxay ku koraan nolosha oo dhan. Laakiin xitaa da'da weyn waxay koraan wax yar, celcelis ahaan by 5-8 mm.
Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, iyo ka reebitaankooda, qofkii da'da hawlgabka ah, sanka iyo xayawaanku wuxuu gaari karaa cabbir aan fiicnayn, kaas oo u adeegsanaya mawduuc joogto ah oo ku saabsan kaftanka. Daraasado ballaadhan oo laga sameeyay Thailand ayaa muujiyay in marka la dhammeeyo koritaanka da 'yar, qofka noloshiisa dambe ee wakhti wakhti yar uu "korayo". Hase yeeshee koritaankani waa mid aad u yar. Marka loo eego da'da 60, nin wuxuu ku koraa 8-10 mudo dheer oo isku mid ah.
Koboca tani, si kastaba ha ahaatee, lama arki karo sababtoo ah ciribtirka iyo daciifinta murqaha, kuwaas oo ku yimaada da'daan inta badan dadka. Iyadoo la'aanta hormoonka koritaanka ee carruurnimada, dadku aad bay u koraan, waxaana lagu magacaabaa nuurad. Luqada dhakhtarrada, xaaladdan waxaa loo yaqaan "nanism hypofizial." Marka horeba maqnaanshaha hoormoonka koritaanka ee qof weyn oo kobaca caadiga ah, noocyada kala duwan ee dystrophy ayaa horumariya, kuwaas oo mararka qaarkood xitaa dhimanaya, laakiin waxay aad u yar yihiin. Nidaamka "hypophysial nanism" ayaa hore u soo jeediyay in somatotropin lagu soo saaro qanjirka 'pituitary'.
Waa maxay qanjaha pituitary hadda og yahay dhammaan ama ku dhowaad dhammaan. Qanjirka 'pituitary' waa muraayadda maskaxda ee hoose, kor u kaca salka maskaxda. Qaabka iyo baaxada qanjirka pituitary wuxuu u eg yahay cherry. Qanjirka 'pituitary' ayaa si fiican u difaacay xoogga ay u nugul yihiin.
Waxay ku taallaa kiis adag oo xooggan - "Turkiga" oo ku yaal saldhigga dhakada. Qanjirka 'pituitary hormone' oo kale ayaa la soo saaraa - hoormoonka qanjirada ka soo baxa (saameeya qanjirka thyroid), adreno corticotropic (wuxuu xoojiyaa qanjirrada adrenal), gonadotropic (firfircooni qanjirka jinsiga), iyo kuwa kale.
Shaqada pituitary waxaa xukuma hipothalamus, aag gaar ah ee maskaxda. Halkaa, xoriyada iyo xayawaanka ayaa la horumariyaa. Hoodka somatotropic, somatoliberin iyo somatostatin waa muhiim. Somatoliberin hypothalamus waxay kordhisaa hormoonka koritaanka hormoonka korriinka qanjirka 'pituitary gland'. Somatostatin, marka laga reebo, wuxuu joojiyaa wax soo saarka somatotropin. Haddii aan rabno in aan kordhino xaddiga hormoonka koritaanka jirka, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo tirada somatoliberin, ama in la yareeyo xaddiga somatostatin.
Muddo dheer waxaa la rumaysan yahay in hormoonka koritaanka uu awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo unugyada muruqyada, kilyaha iyo xubnaha gudaha. Dabadeedna waxa loo soo jeestay in aysan sidan ahayn. HGH waxay awood u leedahay in ay saameeyaan unugyada kaliya ee vitro ee xaddiyada 2,000 wakhtiyada ka sarreeya jir ahaaneed. Gudniinka caadiga ah, HGH wuxuu u dhaqaa oo keliya beerka.
Beerka wuxuu soo saaraa isugeyn sida koritaanka insulin, oo sidoo kale loo yaqaan somatomedin. Somatomedin - waxa kale oo uu leeyahay saameyn dhaqso ah iyo koritaan, taasoo saamaynaysa unugyada bartilmaameedka. Dhakhtar ahaan, badanaa waxaan arkayaa kiisaska marka cudur beerka daran uu ku dhaco sii kordhaya iyo xaalad la mid ah cagaarshow nanism ayaa dhacda, inkasta oo cudurku sidiisa oo kale uu keeno somatomediin la'aanta.
Dhinaca kale, acromegaly wuxuu caadi u yahay heerka caadiga ah ee gulukooska ee dhiigga. Cudurkan kiiskan waxaa keena heer siyaadood ah oo soodomediin ah oo ku jira dhiigga. Guud ahaan, silsiladda xeerka anabolismka leh hormoon somatotropic ayaa lagu dabaqayaa murqaha qalfoofka waa sida soo socota:
Haddii aan rabno in aan yeelno saameyn anabolic, waxaad ku sheegtaa, unugyada muruqyada, markaa waxaan sameyn karnaa:
1. Kordhi xaddiga somatoliberin ee hypothalamus.
2. Yaree xaddiga somatostatin.
3. Gali STG.
4. Ku billow soodomedarka jirka.
Mid ka mid ah kiisaskan, natiijada ugu dambeysa waa la gaarayaa. Waxa kale oo aad labadaba ku socon kartaa waddada lagu soo bandhigayo qodobka muhiimka ah ee dibedda, iyo wadada dhiirigelinta wax soo saarkeeda nafsaddeeda lafteeda. Weli waad sii wadi kartaa wadada kordhinta
dareenka unugyada nafaqooyinka muhiimka ah, laakiin wadahadalku weli ma imanayo. Aynu si taxadar leh u eegno silsiladda oo dhan ee qawaaniinta somatotropin
oo bilaw daaweyn somatotropin ah. Kadibna, oo dhan, oo ah qaab taariikheed, dhammaantood waxay ku bilaabantay. STG waa hormoon peptide. Waxay ka kooban tahay amino acid silig ku filan oo ka kooban haraaga amino acid 191. Isla markii 1921, physiologists ee tijaabooyinka ku saabsan xayawaanka ayaa soo saarey qiyaasta tijaabada ah marka ay soo bandhigeen naqshad cufan oo ah lafaha dambe ee qanjaha pituitary. Sida aan arki karno, suurtogalnimada in la kordhiyo koritaanka dhalinyaradnimada ayaa la cadeeyay waqti dheer.
Somatotropin soodhaha leh ee xoolaha asalka ah ayaa markii ugu horeysay lagu xayirey 1944, oo ka tirsan - 1956. Xitaa markaa, iyada oo la adeegsanaayo STH, curyaannada leh natiijooyin joogto ah oo wanaagsan ayaa bilaabay in lagu daweeyo xoogga iyo weynaanta. Ka dib, waxaa la ogaaday in ay jiraan ugu yaraan saddex nooc oo STH ah oo leh miisaanno kala duwan oo kala duwan. Bini'aadamka, STH waxa lagu soo saaraa unugyada eosinophilic ee qanjirka 'pituitary'.
Kansarrada unugyada eosinophilic, sida caadiga ah, dhacdooyinka gigantooda waxay kobcaan marka koritaanka bini'aadanku uu ka weyn yahay 2 m. Marxaladdan horumarinta daawada, burooyinka noocan oo kale ah ayaa si guul leh loola dhaqmi karaa labadaba caafimaad ahaan iyo si firfircoon. Hase yeeshee kobaca sare, si kastaba ha ahaatee, weli. Ciyaartoyda kubada kolayga kubadda cagta adduunka, waxaa jira dad badan oo qalliin lagu sameeyay oo lagu sameeyay qalitaankii pituitary sanadihii yaraa.
Buro ayaa laga qaadaa sanka (!), Qofkuna wuxuu ku nool yahay, sida haday wax dhaceen. Hase yeeshe, xaalado aan shaqeyn karin. Dhinaca kale, tirada ciyaartoyda "koraysa" ayaa sii koraya, taas oo da 'yar yar lagu soo dhejiyay hormoon korriin ah si kor loogu qaado koritaanka.
Cadaadiska hoormoonka koritaanka ee dhiigga ayaa la jiiday. Inta lagu jiro maalinta waxaa jira, sida qaanuunka, 6-9 oo ah mid aad u ballaaran. Tirada diiqadahan oo kale mararka qaarkood waxay gaaraan 12. Heerka sare ee kor u kaca wuxuu kordhiyaa dhaqdhaqaaqa jireed iyo waqtiga hurdada. Waqtiga Cuntada, dhererka sare ee sii deynta somatotropin, liddi ku ah, hoos u dhac, gaar ahaan haddii cuntadani tahay carbohydrate.
STG-da dhammaan nuucyada waxay leeyihiin nucleer ahaan firfircoon oo firfircoon. Noocyada xayawaanka hoose ee Phylogenetic waxay falcelin ku sameeyaan GHGs ka sareeya, laakiin STG ee noocyada hoose ee aan ku dhaqmin noocyada sare. Tusaale ahaan STG-da dadka, waxay u dhaqmaan noocyada noocyada kala duwan ee xayawaanka, laakiin mid ka mid ah xayawaanka somatotropin ee qof kasta ayaa sameeya.
Daraasadaha STG waxay ku dhaqaaqi doonaan noocyada xayawaannada ee aadka u sarreeya, laakiin maaha aadanaha. STG ee masaska ayaa mar kale u dhaqmi doonta xayawaanka ka mid ah urur hoose, laakiin ma aha oo kaliya dadka ama daanyeer, iwm.